DxOMark nwalere igwefoto nke Galaxy A71 [Nyochaa] | Gam akporosis
DxOMark na-etinye igwefoto Galaxy A71 ule: kedu ka ọ dị mma? [Nyochaa]
El Samsung A71 AX Ọ bụ otu n'ime etiti ama ama na South Korea taa, ebe ọ bụ na ọ bịarutere na Disemba afọ gara aga.
Ekwentị na-abịa na igwefoto quad 64 MP dị n'azụ nke ejikọtara ya na ihe mmetụta 12 MP ultra-wide sensor, a 5 MP macro shooter, na 5 MP lens maka blur mmetụta. A nwalere igwefoto igwefoto niile a na DxOMark na-arụ ọrụ nke ọma, n'agbanyeghị na ọ nwere ọtụtụ adịghị ike. N'okpuru ebe anyị na-aguputa nkwubi okwu ruru na igwefoto ngwaọrụ.
1 Nke a bụ otú DxOMark si kọwaa nsonaazụ nke igwefoto Galaxy A71 nwetara na foto
1.1 Kedu maka arụmọrụ vidiyo?
Nke a bụ otú DxOMark si kọwaa nsonaazụ nke igwefoto Galaxy A71 nwetara na foto
Nsonaazụ foto na vidiyo nke Galaxy A71 na DxOmark
Site na iru akara aka nke 84 na ule DxOMark, Samsung Galaxy A71 enweghị arụmọrụ dị elu maka onyonyo ma ọ bụ vidiyo. Otú ọ dị, oyiyi oyiyi dị anya na ihe onye ọ bụla ga-atụ anya ya site na arụmọrụ dị elu na-akwado site na Qualcomm si Snapdragon 730.
Ngwaọrụ nwere ike inweta ihe ngosi doro anya maka ebumnuche ya na ọkwa dị iche dị elu mgbe a nwalere ya n'ọtụtụ ọnọdụ ọkụ, DxOMark na-ekwu. N'okpuru ọkụ ọkụ na-enwu gbaa, nha nha nyocha ụlọ nyocha dị ntakịrị, yana ọkwa dị iche dị ka nsonaazụ, mana a nabatara ihe oyiyi ahụ n'ozuzu.
Mgbe ị na-ese ihe osise sitere n'okike na ọnọdụ dị oke iche, achọpụtara na Galaxy A71 nwere oke oke ike, na-eme ka e chebe nkọwapụta nke ọma na mpaghara ọkụ na ndò, yana ikpughe lens dị mma.
Mgbe agbapụ n'ime ụlọ, ihe ngosi anya na-adịkarị mma n'okpuru ọnọdụ ọkụ dị mma. Ọnọdụ dị omimi abụghị nnukwu ụlọ ahụ n'agbanyeghị, yana obere onyonyo a na-enwetabeghị ekpughere na ntakịrị ntakịrị isi. Ezi agba agba na-eme ka o doo anya na agba dịkarịsịrị ma nwee obi ụtọ na mkpanaka, yana ezigbo saturation n'ọtụtụ ule.
N'èzí foto nke Galaxy A71 | DxOMark
Galaxy A71 dekọtara ezigbo nkọwa na ule DxOMark larịị n'etiti ime ụlọ (100 lux) na mpụga (1000 lux) ọnọdụ ọkụ, mana nkọwa belata ngwa ngwa na ọnọdụ ọkụ dị ala.
Arụ ọrụ Autofocus na-ahapụ ohere maka mmụba maka ụlọ ọrụ South Korea nwere ọnụ ahịa a n'ihi oge nzaghachi ya nwayọ na ọnọdụ ọkụ niile na ọdịda na-adakarị na obere ọkụ. Ọ na-ewe ihe dịka 500ms (ọkara nke abụọ) maka ngwaọrụ iji banye n'ọtụtụ ọnọdụ, nke dị nwayọ nwayọ, ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ asọmpi ahụ. Formanrụ ọrụ ka njọ na ọnọdụ ọkụ dị ala (20 lux).
Ngwaọrụ Samsung n'ozuzu ha na-enye echiche dị oke obosara site na igwefoto ha dị obosara, yana oghere 12mm na A71 abụghị otu. A na-atụle igwe foto dị ka igwefoto kachasị dị na onyonyo n'èzí, na ezi ikpughe na oke dịgasị iche iche, yana nke ọma na agba agba nke ọma. Otú ọ dị, otu ndò nke acha anụnụ anụnụ dịkwa ọtụtụ, ebe ọ na-enwekarị nkọwa ole na ole.
Ime ụlọ, oyiyi na-agbadata ntakịrị ekpughere ekpughere ma nwee oke oke ikeMana agba na nguzo ọcha na-abụkarị ihe ziri ezi, ọzọkwa, a na-achịkwa mkpọtụ ahụ nke ọma, dịka ndị ọkachamara ọkachamara na DxOMark si kwuo. Otú ọ dị, ọtụtụ nsogbu ndị metụtara ihe oyiyi sara mbara na-apụta ìhè na A71, na ntụgharị ihu igwe geometric na-eme ka ahịrị kwụ ọtọ n'akụkụ ọnụ nke etiti ahụ ka ehulata.
Ọnọdụ bokeh nke Galaxy A71 | DxOMark
Samusng Galaxy A71 enweghị igwefoto raara onwe ya nye, ya mere ogo nke mbugharị mbugharị adịghị n'etiti ndị kachasị mma n'elu ikpo okwu. Nju dị ala ọbụlagodi nso (mmụba 2x) n'ọnọdụ ọnọdụ ọkụ niile, agbanyeghị na ọ kaara mma na ọkụ n'èzí. Tụkwasị na nke a, na-enweghị mgbagwoju anya, ogo nke mbugharị anaghị eme ka ọ dị mma na ọkara ma ọ bụ ogologo oge, ebe nkọwa dị ala, yana nsụgharị ederede na-ezighi ezi. Ọzọkwa, ma mkpọtụ ma ihe arụ ga-abawanye.
Ọnọdụ blur nke Samsung Galaxy A71 bụ ike, ya na ihe nchoputa ihe omimi nke 5 MP raara onwe ya nye nke na-eme ka o doo anya na odi iche site na isi okwu n'ozuzu ya. A na-ahụta ụfọdụ obere ihe na-adịghị mma na ntakịrị ihe na gradient na-adịghị mma na ụfọdụ agbapụ, yana ọkwa ụda na-ekwekọghị ekwekọ na onyonyo ọkụ, mana n'ozuzu ọnọdụ bokeh na-arụ ezigbo ọrụ. Ọdịdị nke bokeh dị mma nke ukwuu, nke nwere mmetụta miri emi siri ike ma dị mma nke ọma, yana ọdịdị dị mma nke echiche bokeh, a na-etinyekwa mmetụta a oge niile na nsonye n'usoro, nke bụ ego, DxOMark gosipụtara.
N'ozuzu n'abalị arụmọrụ abụghị nnukwu na Galaxy A71. Mee ka uche gị, flash auto na-agbanye ọkụ n'ụzọ ziri ezi mgbe ị na-ewere eserese, na-ebute ezigbo ikpughe na isiokwu ahụ, mana nzụlite dị kpamkpam na-egosipụta nke ọma na ngbanwe siri ike na nguzo ọcha na-eduga n'ọdịdị ekwesighi ekwupụta. Nke anụ ahụ, yana ndo siri ike nke agba agba na-agbakarị. A na-ahụkarị nsị na-acha uhie uhie ma na-agakarị, yabụ, onyogho ndị ahụ anaghị aga nke ọma n’ozuzu ya.
Foto abalị nke Galaxy A71 | DxOMark
Otu nyocha ahu yikwara nke oma mgbe ị na-ese foto nke obodo ndi mepere emepe na ala di ala. Na ọnọdụ ọkụ akpaaka, ọkụ ahụ na-agba ọkụ, nke na-akụda mmụọ n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ na ọkụ ebe ahụ ma nwee mmetụta maka paịpụ nhazi ihe oyiyi. Mgbapu na-anọgide na-enweghị atụ, yana amụma siri ike na-acha ọcha, nkọwa dị ala, na mkpọtụ a na-ahụ anya, gụnyere nsonaazụ mkpọtụ na mpaghara nke agba siri ike. Cityscapes na flash anya bụ ubé mma, na a chawapụrụ ikpughe. Agbanyeghị, oke dị ike na - eduga na - eme ka ọ pụta ìhè na - egbusi onyinyo. A na-ahụkarị ihe oyiyi mmụọ na mmegharị ahụ, ya mere, nkọwa zuru ezu ka dị ala.
Tụgharị na ọnọdụ abalị nke A71 raara onwe ya nye na-ewepụta eserese abalị ka mma, yana isiokwu na-enwu gbaa, ndabere, na oke ike na-eweta nsonaazụ dị ụtọ karị. Agbanyeghị nke a, ogo abalị dị mma.
Kedu maka arụmọrụ vidiyo?
Site na inweta akara vidiyo nke 74, n'ozuzu video àgwà na Samsung A71 bụ nnọọ ala, ma ngwaọrụ ahụ nwere ike ikpughe obi ụtọ na ọnọdụ ọkụ dị mma, yana usoro nkwụsi ike ya dị irè.
Video autofocus bụ ebe e wusiri ike maka ekwentị, na oge mmeghachi omume dị mma, ihe na-akpali akpali ziri ezi, na nsonaazụ a na-ekwughachi mgbe ị na-edekọ isiokwu dị iche iche Agbanyeghị, ọdịda na-eme site na nsuso autofocus, nke dara ogbenye ma ọnọdụ ọkụ ma na-enwu gbaa, yana ntụgharị na-enweghị atụ na mgbatị doro anya doro anya. Nkọwa ahụ dịkwa nnọọ ala karịa ihe ị na-enwetakarị na ngwaọrụ 4K.
Nchekwa vidiyo dị mma na ngwaọrụ ahụ, na-ejikwa mmetụta mmegharị achọghị na nke ọma na ma ka na-ejegharị vidiyo na ọnọdụ ọkụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » DxOMark na-etinye igwefoto Galaxy A71 ule: kedu ka ọ dị mma? [Nyochaa]
Oppo A12 gafere asambodo Bluetooth na-egosi njirimara ya
Oppo A92s bụ ekwentị na - esote nke nwere ihuenyo 120 perz nwere oghere